China American Standard Banded achọkarị ịna Iron Pipe Fittings factory na-emepụta | Donghuan
Anyị factory Donghuan achọkarị ịna iron oge ọgbụgba, bụ ọkachamara na-emepụta galvanized na nwa achọkarị ịna ígwè anwụrụ oyiyi akwa na SDH American ọkọlọtọ. Anyị eguzobewo usoro dị mma nke kwekọrọ na IS0 9001: 2008 wee nwee asambodo nke CRN na Canada, European of CE and Turkey of TSE.
Site na mmepụta 4000 mts kwa afọ, ndị ọrụ 280 ndị mmadụ, guzobere na 1986, anyị meriri ọtụtụ ndị ahịa a ma ama. Anyị na-emepụta European na American ụdị couplings, clamps na ndị ọzọ na nkedo akụkụ dị ka ndị ahịa si Eserese ma ọ bụ n'omume
1.Malleable pipegwè anwụrụ oyiyi akwa, BS, ekpo ọkụ gbanye agbatị;
2.FOB TIANJIN n'ọdụ ụgbọ mmiri, CHINA;
3.Ahịa niile gosipụtara na USD;
4.Packet n'ime katọn, mgbe ahụ, na pallets;
5.Tkwụ ụgwọ: 30% ịkwụ ụgwọ, 70% tupu ebufe;
Oge nnyefe: 45days mgbe anata T / T 30% ịkwụ ụgwọ;
7.oge nke ndaba nke ego: 10days.
Achọkarị ịna Nkedo Iron Pipe Fittings
Achọkarị ịna Iron Pipe Dabara Adaba
Achọkarị ịna Iron Pipe Fittings Uk
Achọkarị ịna Iron Pipe Fittings Na Din Standard
Ngwongwo Ngwongwo Nchara Na Ngwunye, Igwe anaghị agba nchara ọnụ, Njikọ Ikuku, Air sooks njikọ Europen Type, Air sooks njikọ, Igwe anaghị agba nchara Pipe ọnụ,